Akụkọ - Ike dị elu na ọgụgụ isi bụ isi ihe na-emebisi ikpo ọkụ
Ike dị elu na ọgụgụ isi bụ isi ihe na-eme ka ikpo ọkụ na-agbaji
N'oge a, ụgbọ ala ọhụụ ọhụrụ abụrụla nhọrọ nke ọtụtụ ndị ahịa. Agbanyeghị, ọ dị mma ịmara na dịka ụlọ ọrụ na-akwado nkwado kachasị mkpa maka ụgbọ ala ike ọhụrụ, na-ebugharị ikpo ọkụ na-eche ogologo oge ị na-akwụ ụgwọ, ezughi oke ikike ọrụ ngwa ngwa, yana ọkwa ọgụgụ isi dị ala. Enwere ike ikwu na ichikota ihe bu ihe kachasi gbochie mmepe nke ugbo ala ohuru.
Ya mere, otu esi dozie nsogbu nnabata aburula ihe mbu maka ulo oru dum. Fọdụ ndị nọ n’ime kwenyere na teknụzụ na-ebugharị ike dị elu bụ isi ihe na-emebisi ikpo ọkụ n’ọdịnihu. Na nke a, ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ nwere usoro. Switzerland ABB amalitela Terra High Power DC ngwa ngwa na-acha ọkụ ọkụ, nke nwere ike iwepụta 350 KW, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ nke nke Tesla super caji ikpo. Na mgbakwunye, ebidola rụọ ọrụ izizi ngwa ngwa nke European Fast Charge Alliance Ionity. A na-agbaji ikpo ọkụ site na sistemụ njikọ jikọtara ọnụ, yana ike odori ruru 350 KW, nke nwere ike ịchekwa oge nkwụ ụgwọ.
Na China, kedu ọkwa nke teknụzụ na-ebu ikike dị elu emepụtara? Kedu ihe ngwọta na-akwụ ụgwọ dị? Gaa na ngosipụta a ma ị ga-ama! On June 15-17, nke 11 Shenzhen International Nchaji Station (ikpo) ụzụ Equipment Ngosi ga-ẹkenịmde ke Shenzhen Convention na ngosi Center. Youyou Green Energy, Yingke Rui, Yingfeiyuan, Koshida, Polar Charger, Orange Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ 200, dịka Electric New Energy na Shenzhen Jiangji, ga-egosipụta ihe ngwọta dị iche iche na-akwụ ụgwọ maka ọdụ ụgbọ ala na teknụzụ ọhụrụ na ngwaahịa maka ịkwụ ụgwọ ike dị elu.
N’etiti ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị so na ihe ngosi ahụ, kedụ ngwaahịa ọhụrụ Shenzhen Youyou Green Energy Electric Co., Ltd (nke akpọrọ “Youyou Green Energy”) ga-eweta? Ọ na-ghọtara na Youyou Green ga-egosipụta atọ usoro nke àjà ihe ọ ultraụ -ụ-n'obosara nso nso mgbe nile ike odori modul usoro, State Grid mgbe nile ike odori modul usoro na 30KW enwekwukwa E usoro odori modul.
Youyou Green nwere ike ịbụ na-eduga ika na Nchaji modul ụlọ ọrụ. Na June 2017, Youyou Green bụ onye mbụ mepụtara modul 30KW na-ebu ikike dị elu. Mgbe otu afọ nke nkà na ụzụ ọhụrụ, Youyou Green ulo oru ọhụrụ àjà ihe ọ ultraụ -ụ-dum voltaji nso mgbe nile ike modul usoro. N'etiti ha, 30KW ultra-wide voltage dị iche iche na-agbanwe agbanwe oge niile module UR100030-SW arụmọrụ pụtara ìhè. UR100030-SW na-enweta ihe ndọtị nrụpụta nke 200-1000V, ma nwee ike iwepụta 1000V / 30A na nnukwu voltage na 300V / 100A na obere volta, na-enweta 30KW ikike na-aga n'ihu mgbe niile na oke ọkụ ọkụ. Ogwe odori nke modul ahụ nwere ike ịmepụta nnukwu ikike ugbu a n'okpuru otu ọnọdụ volta ahụ, na-ebelata oge nkwụ ụgwọ, na-eme ka arụmọrụ arụmọrụ ma belata ụgwọ ọrụ.
Ugbu a, Youyou Green nwere kasị saa mbara ngwaahịa usoro na ubi nke odori ikpo modul, gụnyere: 30KW usoro, 20KW usoro, 15KW usoro, mba okporo ụzọ mgbe nile ike usoro na àjà ihe ọ ultraụ -ụ-dum voltaji nso mgbe nile ike usoro. Na ike oru nnyocha na mmepe ike, magburu onwe ngwaahịa mma, systemhazi management mode na onwe ha nnyocha na mmepe ọhụrụ uru, ụlọ ọrụ a na-ebe ghọtara site ahịa. Nnukwu ntụkwasị obi nke ngwaahịa Youyou Green Energy modul bụ nke ama ama, nke a na-ekewapụ na mmụọ ya pụrụ iche na nchụso kachasị.
Na mgbakwunye na ịbudata ikike dị elu, ọgụgụ isi bụkwa isi ihe na-eme ka ikpokọta ikpo ọkụ. Ugbu a, ọtụtụ obodo na-ewu smart odori ikpo. Ihe ndị a na-akwụ ụgwọ na-ejikọta ụgwọ, njikwa, nkwukọrịta igwe na ọrụ ịgba ụgwọ. Mgbe onye ọrụ ahụ batara na usoro nkwụ ụgwọ, enwere ike ịgba ya site na swiping ma ọ bụ nyochaa koodu iji nweta ike. Mgbe ịkwụ ụgwọ ahụ gwụchara, a na-agbanyụ ọkụ na-akpaghị aka iji gbochie ọkụ sitere na ịchabiga ọkụ n’ọkụ. Na-akwụ ụgwọ site WeChat ma ọ bụ Alipay scan code, ọ dịghị mkpa ịgbanwe mkpụrụ ego ma ọlị.
Fọdụ ụlọ ọrụ ọkachamara kwenyere na ugbu a anụ ụlọ mmepe nke odori ikpo bụ dịtụ mụ, elu-ike odori, wireless Nchaji ga-abụ isi mmepe direction nke ụlọ ọrụ.